Songadina tamin'ny nandavoan'i Barea an'i Nigerianina - ewa.mg
Songadina tamin’ny nandavoan’i Barea an’i Nigerianina
Ankafizo ny baolina roa matin'i Barea tamin'ny andro fahatelo ny vondrona B teo amin'ny CAN 2019.
I Lalaina Nomenjanahary sy i Carolus Andrea no nampiditra ny baolina 2 an'i Barea an'i Madagasikara.
Misaotra Barea. Alefa Barea. Miara mirona.
Barea - Can 2019
Manohy ny diany ho any amin’ny manasa-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara “Gold Top 20”, taranja rugby ny TFA Anatihazo (Pilo kely). Fihaonana, notanterahina teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, omaly alahady. Teo amin’ny lalao voalohany, resin’ny TFA, tamin’ny isa 20 no ho 15 ny XV Fa Andohatapenaka. Nosahiranin’ny XV Fa ny Pilo kely vao nahazo fandresena, tamin’ity. Na izany aza, mbola nipetraka ny traikefa sy ny fahaiza-manaon’ireo mpilalaon’Anatihazo, izay efa zatra lalao goavana. Anisan’izany, ry Rasta sy Gaby kely ary ry Ginot sy Marsa, teo amin’ny fitsaram-baolina. Nitondra ny lalaony tao anaty “avant” ny TFA izay nanatombo teo amin’ny haben’ny vatana. Nitarika an’isa hatrany ry zalahy, nahatonga baolina nentin-tanana indroa, teo amin’ny fizaram-potoana voalohany, ka nahalasa ny isa ho 10 no ho 3. Tsy nahafaty afa-tsy “hors jeu” tokana kosa ny XV Fa. Niezaka nanohitra ny XV Fa, teo amin’ny tapa-potoana faharoa ka nahatonga baolina nentin-tanana ihany koa, saingy tsy nitazam-potsiny koa ny TFA fa namono baolina hatrany. Mendrika ny lalao nasehon’ny XV Fa, izay nampiseho endri-dalao tsara sy ambony. Ekipa manana ny ho aviny tokoa atsy ho atsy ny XV Fa. Teo amin’ny lalao faharoa, tsy tontosa hatramin’ny farany ny fihaonana teo amin’ny JSTA Ambondrona sy ny Cosfa. Noravain’ny mpitsara teo amin’ny fanatanterahana ny fanalavam-potoana mantsy ny fihaonana teo amin’ny roa tonta, noho ny hamaizinan’ny andro. Nisaraka ady sahala, 20 no ho 20 ny andaniny sy ny ankilany, tamin’izay. Tsy mbola fantatra kosa ny fotoana hamerenana izany lalao izany, fa miandry ny fivorian’ny komity mpanatanteraka eo anivon’ny Malagasy Rugby. Raha tsiahivina, ady sahala 17 no ho 17 ny isa teny amin’ny solaitrabe, tao anatin’ny fe-potoana ara-dalana. TompondakaL’article Rugby – «Gold Top 20»: tafita amin’ny manasa-dalana ny TFA a été récupéré chez Newsmada.
NBA – Voka-dalao 10 Decembre 2018 – Philadelphia Sixers vs Detroit Pistons
Ligue des Champions – Voka-dalao 28 novembre 2018 PSG vs Liverpool
Neymar sy i Mbappé nanao fanazaran-tena miaraka tamin’ny ekipa
Raha araky ny vaovao heno dia efa afaka niara nilalao tamin’ireo namany ireto mpanafika ro ireto tamin’ny alatsinainy tany Paris. Ny fandraisana anjaran’i Kylian Mbappé sy Neymar amin’ny Liverpool izao alarobia izao dia miha mazava. Araky ny nolazain’i Thomas Tuchel tamin’ny asabotsy, dia afaka niverina nanao fanazaran-tena miaraka amin’ny vondrona pariziana ireto mpanafika roa ireto ny alatsinainy hariva. Hatramin’ny naharatran’izy ireo, nitranga tamin’ny talata niaraka tamin’ny ekipa nasianaliny, dia voatery nionona tamin’ny fitsaboana sy fanazaran-tena mitokana izy ireo.
Nations League – Croatie vs Espagne
Croatie 3-2 Espagne Buts : Kramarić (54e) et Jedvaj (69e et 90e+4) ho an’i Croatie // Ceballos (55e) et Ramos (78e sp) ho an’i Espagne Mandeha haigana be ny amin’ny sehatry ny baolina kitra. Ny ampitson’ny fandresen’ny Frantsa tamin’ny Coupe du Monde, dia teo amin’ny fara-tampony i Croatie niaraka tamin’iny finale naharesy azy iny, nefa ny Espagne tamin’io dia nanihanian’izao tontolo izao tamin’y fahareseny teo amin’y ampahavalon-dalana tamin’ny Russie. Telo volana taty aoriana, dia nivadika ny rasa tamin’ny fetaka nataon’i Espagne tamin’ireo Croate (6-0) tamin’ny lalao mandroso. Ohatry ny tafaverina mihitsy ny fahalebiazan’i Espagne tamin’io ary ny Croatie efa nofinofy sisa. Roa volana taty aoriana indray, dia namaly faty ireo Croate tamin’ny minitra farany tao amin’ny Stadion Maksimir tany Zagreb (3-2), ary mety afaka ny hanonofy ho tafiakatra amin’ny finale four indray izy ireo izao. Mandeha hainga ben y baolina kitra.
Mbola voatazon’ny tovovavin’i Nizeria ny anarana maha tompondakan’i Afrika azy, eo amin’ny taranja baolina kitra. Lasan’ny Super Falcons Nizeria, fanintsiviny indray mantsy ny amboara, tamin’ity andiany faha-11, ity. Norombahin’ny Super Falcons, avy any Nizeria, ny anarana maha tompondakan’i Afrika “Can 2018”, taranja baolina kitra, sokajy vehivavy. Resiny teo amin’ny famaranana, tamin’ny fandakana ny “tirs au but”, 4 no ho 3 ny tovovavin’i Afrika Atsimo. Fihaonana, notanterahina tao amin’ny kianja Accra, renivohitr’i Ghana, ny asabotsy lasa teo. Tsy mora tamin’ny Nizerianina, ny nahazo ity anaram-boninahitra ity, satria niady hatramin’ny minitra farany, ny fihaonana teo amin’ny roa tonta. Samy niezaka nitady hamonoam-baolina ny an-daniny sy ny an-kilany, saingy tsy nisy nety nahatafiditra baolina izy ireo, tao anatin’ny 90 mn, nilalaovana. Mbola sahala ihany koa ny isa tao anatin’ny fanalavam-potoana, 15 mn indroa miditra. Voatery niditra teo amin’ny fandakana ny “tirs au but” ny roa tonta, hamaritana izay ho mpandresy. Nanatombo teo amin’ny fahaizana mandaka teo ny Nizerianina, ka nivoaka ho mpandresy. Afa-bela, tamin’i Afrika Atsimo izany ny Nizerianina, efa resin’izy ireo, tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0 teo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona. Fanintsiviny kosa ny nahazoan’ny Super Falcons, ity Can ity, hatramin’izay andiany faha-11 nisiany izay. Nahazo ny laharana fahatelo, ny Liona tsy voafolaka avy any Kameronina, rehefa nanilika ny Voromahery Malianina, tamin’ny isa mazava, 4 no ho 2, teo amin’ny fiadiana ny laharana fahatelo. Voahosotra ho mpilalao mendrika sy mpamono baolina betsaka indrindra, tamin’ity “Can 2018” ity, ilay lohalaharana afrikanina tatsimo, i Chrestinah Thembi Kgatlana. Hisolo tena an’i Afrika, any amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany “Mondia 2019”, hatao any Frantsa, i Nizeria, i Afrika Atsimo ary i Kameronina. Tompondaka L’article Kitra vehivavy – «Can 2018»: voahosotra ho tompondaka ny Super Falcons Nizeria a été récupéré chez Newsmada.
Fakana an-keriny tao Anjozorobe: matin’ny fitsaram-bahoaka ny naman’i Del Kely iray
Lehilahy iray isan’ireo ekipan’i Del Kely no matin’ny fitsaram-bahoaka, ny talata teo, tao amin’ny distrikan’Anjozorobe. Naterin’ireo mpitandro filaminana sy ny fokonolona vao mangirandratsy tao amin’ny zandarimarian’i Betatao izy. Tsy niala lavitry ny toerana anefa ireo fokonolona marobe nanara-dia. Taorian’izay, tapaka ny hevitra fa hotohizana sy haterina eny amin’ny sampandraharaha misahana ny heloka bevava eny Fiadanana ny famotorana an’ilay voasambotra. Rehefa teny an-dalana, nirifatra nitsoaka ilay naman’i Del Kely io ka nifanenjehan’ireo andian’olona marobe. « Tsy afaka nampiasa ny fitaovana mba hiarovana ny ain’io olon-dratsy io ireo zandary nanatanteraka iraka fa sao mahatifitra olona tsy manan-tsiny », hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray. Tsy lasa lavitra akory, voasambotry ny fokonolona ralehilahy ka niharan’ny daroka sy ny vono.Vokany, naratra mafy ary nitarika tamin’ny fahafatesany noho ny fahaverezan-dra be loatra izany. Henintsoa HaniL’article Fakana an-keriny tao Anjozorobe: matin’ny fitsaram-bahoaka ny naman’i Del Kely iray a été récupéré chez Newsmada.
Semi-marathon – «Mada 2021»: tompondaka i Mampitraotse sy i Nathalie
Tontosa tany Mahajanga, ny asabotsy 31 jolay lasa teo, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, ny “Semi-marathon”, taranja atletisma. Fihaonana, notohanan’ny Telma. Nanjakan’ny klioban’ny polisy (CosPN Boeny) ny fifaninanana satria saika niakatra lampihazo hatrany izy ireo.Teo amin’ny “senior” lehilahy, mbola noporofoin’i Mampitraotse indray ny maha mpanjakan’ny hazakazaka lavitra ezaka azy, eto Madagasikara. Notarihin’i Mampitraotse hatrany am-boalohany ka hatramin’ny farany ny hazakazaka. Tontosany tao anatin’ny 1 ora 09 min 21 s ny halavirana 21,098 km.“Faly rehefa mandresy fa tsy misy hoe tombontsoa be amin’ity hazakazaka ity. Araka izany, anaovako antso amin’ny tomponandraiki-mpanjakana, indrindra ny minisitry ny Fanatanjahantena, mba hijerena ireo atleta miaro ny voninahi-pirenena. Rehefa misy fifaninanana ihany vao misy mahafantatra sy antsoina”, hoy i Mampiatraotse.Nomarihiny fa 8 taona ny naha atletan’ny CosPN azy, tsy misy karama na fanohanana izany fa fiarovana ny voninahi-pirenena fotsiny.Faniriany ny mba ho lasa mpiasam-panjakana indray andro any. Faharoa i Rivosoa Hobilalaina, avy amin’ny CosPN Analamanga, 1 ora 12 mn 4 s ary fahatelo Rambeloson Fiele, Cosfa, 1 ora 14 mn 3 s.Teo amin’ny vehivavy, voalohany Rasoanirina Nathalie, atletan’ny Cami Itasy. 1 ora 45 mn 50 s, narahin-dRabemihoatra Oliva, CosPN Analamanga. 1 ora 47 mn 12s. Fahatelo Rasoalalainjanahary Emma, avy amin’ny CosPN Analamanga ihany. Tontosany tao anatin’ny 1 ora 48 mn 01 s ny hazakazany. TorcelinL’article Semi-marathon – «Mada 2021»: tompondaka i Mampitraotse sy i Nathalie a été récupéré chez Newsmada.